पहिलोपल्ट सेक्स गर्दा युवतीहरु पुरुषबाट के चाहान्छन? युवतीबाट व्यक्त - IAUA
पहिलोपल्ट सेक्स गर्दा युवतीहरु पुरुषबाट के चाहान्छन? युवतीबाट व्यक्त
ramkrishna November 6, 2020	sex
यौनसम्पर्क गर्ने धेरै तरिका र आसनहरु छन् । तर यौनसम्बन्धको समय तपाईं र तपाईंको साथी दुवैको साथ भएमा जस्तोसुकै आसनमा पनि आनन्ददायी यौनसम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ । तर यो गाह्रो बिषय हो । तपाईं सुखी र आनन्ददायी यौनसम्बन्धको परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने यी टिप्स महत्वपूर्ण हुन सक्छन् ।
यौन सम्बन्ध अघि कुराकानी गर्नुहोस् । ता की आत्मियता र सामिप्यता दुवै बढोस् । तपाईं सिधै यौनसम्बन्धमै लागिहाल्नुभयो भने त्यसले पछिसम्म फाइदा नदिन पनि सक्छ । हतार नगर्नुहोस्, आफ्नो साथीका कुरा पनि सुन्नुहोस् अनि आफ्ना कुरा पनि सुनाउनुहोस् । थोरै ननभेज कुरा पनि गर्नुहोस् । तर धेरै होईन ।
आफ्नो गुणगान नसुनाउनुहोस्ः
मानौं तपाईं एकदम शानदार खेलाडी हो । तर यो कुरा तपाईंको यौन साथीलाई भन्न जरुरी छैन । सकेसम्म तपाईं कसरी सन्तुष्ट दिने र लिने भन्नेमा लाग्नुस् ।
तपाईंको साथीलाई अँगालोमा बाँधिएर बस्न मन पर्नसक्छ । किचन, रेष्टुरेण्ट, बाथरुम, सिंढी वा लिफ्टमा दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ भने माया दर्शाउनुहोस् । अँगालोमा बाँध्नुहोस् । तपाईं सम्बन्धको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यसले दुवैजनालाई दिक्क नलाग्न सक्छ । अझै हल्का मदिरापानले यो क्षणलाई अझ रोमान्टिक बनाउन सक्छ । तर याद राख्नुहोस् नशा चाहिँ हल्का मात्रै होस् ।
ध्यान राख्नुहोस् तपाईं दुई मिनेटमै पाक्ने चाउचाउ बनाउन लागिरहनु भएको छैन । यौन सम्बन्ध स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ । सकेसम्म फोर प्ले मा समय दिनुस् । चुम्बन गर्नुस्, माया गर्नुस् । सुम्सुम्याउनुस् । सम्झिनुस्, तपाईंले मिठो स्वाद दिएर छाड्दै हुनुहुन्छ ।
Previous Previous post: किबोर्ड सर्टकट विन्डोज अपरेटिंग सिस्टम
Next Next post: एकै स्थानमा सेक्स गर्दा सेक्सप्रति रुची घट्ने : अध्ययन